Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Happy Friday
Happy Friday ဆိုတာဘာလဲ?
MPTအသုံးပြုသူများဟာ သောကြာနေ့တွင် New Htaw B နှင့် Data Carry Pack ဝယ်ယူတိုင်း အပိုခံစားခွင့်များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနေ့တိုင်း New Htaw B pack အသစ်ဝယ်တာနဲ့ ဒေတာသုံးရန် အပိုဆောင်းNew Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၅၀၀၀ကျပ်အထိ၊ Data Carry pack အသစ်ဝယ်တာနဲ့ ဒေတာအပိုဆောင်း 1500MB အထိ ရရှိနိုင်မှာပါ။
(ကျပ်) New Htaw B ဖုန်းဘေလ် (ကျပ်) ဒေတာသုံးရန် အပိုဆောင်း ဝယ်ယူရန် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
1000Ks Main Balance
5000Ks New Htaw B Balance 1000 Ks 15 Days *5001# *500# *224#
2000Ks Main Balance =>
10000Ks New Htaw B Balance 2000 Ks 30 Days *5002#
5000Ks Main Balance
25000Ks New Htaw B Balance 5000 Ks 60 Days *5005#
ကြိုက်ရာသုံး ဒေတာ ကြိုက်ရာသုံး အပိုဆောင်းဒေတာ
699 Ks 45O 15
[ကြိုက်ရာသုံးဒေတာများကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်သည်) *777*1#
999 Ks 1000 35 *777*2# or
1,399 Ks 1400 50 *777*4#
1,999 Ks 2000 75 *777*5#
2,999 Ks 3000 100 *777*6#
4,999 Ks 5000 150 *777*7#
9,999 Ks 10000 300 *777*8#
19,999 Ks 20000 700 *777*9#
29,999 Ks 30000 1500 *777*0#
အပိုလက်ဆောင်များ ရရှိဖို့အတွက် အသုံးပြုသူများသည် New Htaw B နှင့် Data Carry Pack ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးမျိုးကို သောကြာနေ့များတွင် ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာအပိုဆောင်းလက်ဆောင်များ ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများသည် သောကြာနေ့တိုင်းတွင် New Htaw B မှ ဒေတာအသုံးပြုရန် (6.1Ks/MB) ဖြင့်
New Htaw B Balance အပိုဆောင်းရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Balance ကို သက်တမ်းအလိုက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများသည် သောကြာနေ့တိုင်းတွင် Data Carry Pack အသစ်မှ ရရှိသောအပိုဆောင်းလက်ဆောင်ဒေတာများကို ရက် (၃၀) အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်အတွင်း ဒေတာများကို သယ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါသည်။
MPT Viu Data Pack
Viu Pack ထောင်ပေါင်းများသော ဇာတ်ကားများကို Viu ဒေတာ 550 MB နှင့် Viu VIP ပါဝင်သော Viu Pack ကို ၅၄၉ ကျပ် ဖြင့် ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ။
၁။ Happy Friday ဆိုတာဘာလဲ။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ သောကြာနေ့တိုင်းတွင် New Htaw B ဝယ်ယူပါက ဒေတာအသုံးပြုရန် အပိုဆောင်း New Htaw B Balance ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Data Carry Pack ဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်းဒေတာ(MB) များရရှိနိုင်မည့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။သောကြာနေ့မှာ Data Carry Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ။
သောကြာနေ့မှာ Data Carry Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အပိုဆောင်းဒေတာ (MB) များရရှိမှာပါ။
၃။ သောကြာနေ့မှာ New Htaw B Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ။
သောကြာနေ့မှာ New Htaw B Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း ဒေတာသုံးရန် အပိုဆောင်း New Htaw B Balance များရရှိမှာပါ။
၄။ အပိုဆောင်းရရှိတဲ့ခံစားခွင့်တွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မှာပါလဲ။
သုံးစွဲသူဝယ်ယူသည့် Product သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ သောကြာနေ့မှာ အခြားပက်ကေ့ချ် (Social pack, night time data pack, voice pack) တွေဝယ်ယူပါတယ်။ အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရရှိမှာလား။
မရရှိပါ။ MPT ၏ လူကြိုက်အများဆုံး Package များဖြစ်သည့် New Htaw B နှင့် Data Carry Packs များဝယ်ယူပြီး အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များရယူပါ။
၆။ သောကြာနေ့မှာ အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရတာအပြင် တခြားပြောင်းလဲသွားတာတွေရော ရှိပါသလား။
မရှိပါ။ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းနှင့် သက်တမ်းတို့အပြင် Carry-over function အစရှိသည့် ခံစားခွင့်များအတိုင်း ပုံမှန်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ အပိုဆောင်း New Htaw B balance ကို ဒေတာ (6.1Ks/MB ဖြင့်) အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ဝယ်ယူရင် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရမှာလဲ။ ဝယ်ယူရမည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ထားပါသလား (ဥပမာ - MPT4U၊ USSD အစရှိသဖြင့်)။
သတ်မှတ်မထားပါ။ MPT4U၊ *777#၊ *500#၊ *106# အစရှိသဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ သောကြာနေ့တွင် New Htaw B နှင့် Data Carry Packs အသစ်ဝယ်ယူလိုက်တိုင်း အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များ ရရှိပါမည်။
၈။ Friday မှာ New Htaw B နဲ့ Data Carry Packs ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား။
ရပါတယ်။ New Htaw B Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *500# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Data Carry Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift (သို့) 2.လက်ဆောင်ပေးမည်”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သောကြာနေ့တွင် လက်ဆောင်ပေးပါက လက်ဆောင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ New Htaw B (သို့) Data Carry Pack ၏ သောကြာနေ့တွင်ရရှိမည့် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များပါ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ Happy Fridayပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်ထိပါလဲ။
ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန်အထိ။